Hanover dia iray amin'ireo tanàna malaza indrindra any Alemana miaraka amin'i Munich, Hamburg ary ny hafa. Io no foibem-pitantanana ny faritra ambanivohitra Lower Saxony ary manana tantara ara-tantara manan-tantara. Hatramin'ny XII ka hatramin'ny XIX am. Ny tanàna dia renivohitry ny fanjakana iray samihafa - ny fanjakan'i Hanover, izay nandritra ny taonjato maro dia nifamatotra tamin'ny fifanarahana ara-politika tamin'i Angletera. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa dia nalahelo mafy ilay tanàna, ary nandray anjara tamin'ny fanorenana indray ireo mpankafy 50 taona. Ireo tranobe tsara tarehy ihany no naverina tamin'ny laoniny ary tsy teo amin'ny toerany tany am-piandohana, ny habaka taloha dia nihena be. Na izany aza, ny toeram-piasan'i Hanover amin'izao fotoana izao dia toerana tsara tarehy sy be mpitsidika, tranombakoka, fampirantiana ary tsangambato. Amin'ny alalan'ilay tanàna no misy ilay kofehy mena midorehitra, izay mampiray ny toerana manan-tantara 35 mahery ao an-tanàna, ny fanaraha-maso lalina izay haka fotoana be. What to see in Hanover first?
Hanover - New Town Hall
Ny tranobe, izay naorina tamin'ny toeram-piompiana beecha tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, dia mitovy amin'ny trano iray tena izy. Betsaka ny fanamaivanana an-tsokosoko, izay manaloka ny fasan'ny tranobe, dia natao tamin'ny endriky ny sehatra manan-tantara avy amin'ny fiainan'ny tanàna. Ny fanindrahindrana tokana miavaka dia ahafahan'ny mpizaha tany mivezivezy any amin'ny toerana misy ny lapan'ny tanàna, izay ahitana ny deck hijery ny maso, izay ahafahana manokatra faritra malalaka.
Trano Old Town - Hannover
Ity tranobe ity dia naorina tamin'ny taonjato faha-15, saingy tamin'ny fotoana naharatran'ny fandringanana be dia be ary nosoloina tamin'ny fanorenana ny taonjato faha XIX, izay tena namerina tanteraka ny endrika tany am-piandohana tao amin'ny lapan'ny tanàna. Ny tena sarobidy dia ny fiangonan'ny trano, izay maneho ny sarin'ny filohan'i Hanover, ary koa ny fanorenan'ny tranobe, voaravaka gitara maro.
Museums of Hanover - Museum Sprengel
Ao amin'ny tranobe, naorina tamin'ny taona 1979 teo amoron'ny ony fitahirizana kanto, no tranombakoka malaza indrindra manerantany any Eoropa. Ao anatin'izany no ahitanao ny sarin'i Chagall, Picasso, Klee, Munch, Christo, Malevich ary ireo solontenan'ireto trangan-javatra toy ny expressionism, abstractionism, surrealism, Dadaism, sns.
Amin'ny voalohany, ny trano fanorenana trano dia trano maoderina, na dia tamin'ny 1889 aza no natsangana azy tao anatin'ny fomba amam-panao. Ao amin'ny tranom-bakoka no misy tsangambato momba ny zavakanto romanina, grika, egyptiana, Etruscan fahiny izay miara-miasa amin'ny fitaovana fitaovam-piadiana amin'ny taonjato faha-18 sy ny asa maoderina.
Mizara ho fizarazarana 4 ity tranombakoka ity, ny iray amin'izany dia natokana amin'ny sary hosodoko sy sary sokitra nanomboka tamin'ny vanim-potoanan'ny fampiroboroboana ny zavakanto tamin'ny taonjato faha-11 ka hatramin'ny fiandohan'ny vanim-potoana Impressionista.
Ireo departemanta sisa tavela dia natokana ho an'ny tantara voajanahary - anthropologie, zoologie, arkeolojia. Ny tombontsoa manokana dia ny fampiratiana ny vanim-potoana efa taloha.
Izy io dia natsangana tamin'ny 1865 ho toy ny garderie ho an'ny fiompiana bibidia. Amin'ny zaridaina, ny mpitsidika dia nanokatra ny varavarany tamin'ny taona 2000. Ao amin'ny vala dia biby mihoatra ny 3000 no karazany 220, mpilalao afovoan-tany sy Afrikana. Ny fandehanana manodidina ny vala dia tsy fandinihana fotsiny ny mponina, fa milalao amin'ny endrika lalao mampientanentana mifototra amin'ny fisian'ireo mpanjanaka voalohany. Ny lalana mitodika eo anelanelan'ny vatolampy sy ny lianas, ankehitriny ary avy eo mahita eo anoloan'ireo mpizaha-tany mahavariana fa ny skeleton an'ny parachutista dia mijanona ao anaty kirihitra, avy eo dia misy fikarohana ara-archaikana marina, afaka mandray anjara avokoa ny rehetra.
Any Alemana dia afaka mitsidika tanàna hafa mahaliana ianao: Cologne , Regensburg , Hamburg , Frankfurt am Main .
Dokam-barotra amin'ny visa ho an'i Alemaina
Chufut-Kale - tanàna lehibe
Sezoniana ao Bali
Monastera any Kykkos, Sipra
Ski resort Bukovel, tendrombohitra Karpaty
Hurghada, valan-drano "Mirage"
Evpatoria - toetrandro
Blue Lakes any Kazakhstan - fialam-boly ataon'ny olo-malaza
Vehivavy vita amin'ny hoditra
Ny toerana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao ho an'ny fiainana - Monaco
Salady miaraka amin'ny tsaramaso koreana - sakafo mahasalama mahazatra sy tsiro fohy
Haddock ho an'ny mpivady
Nina Dobrev sy Vin Diesel
Ireo zanaka Will Smith amin'ny fotoam-pampianaran'ny fanadihadiana: toy ny rano roa rano!
Fanamboaran-trano vita amin'ny biriky sy solaitrabe
Mijoroa amin'ny solomaso
Minoa izany, tsy te ho .., fa ilaina: 10+ mpiasa mahomby mahomby
Fialan-tsasatra any Isiraely
Gelendzhik - valan-drano "Golden Bay"
Cookie shaped cookware
Amin'ny inona ny manao fitaratra?
Demi-akanjo akanjo ho an'ny vehivavy aorian'ny 50 taona
Dysarthria amin'ny ankizy - fitsaboana
Inona no tokony ataoko amin'ny tsindry ambany?
Chalma miaraka amin'ny tanako
Andro iraisam-pirenena momba ny fitantanam-bola